တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး (၁၀/၂၀၂၁)သို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြား
အောက်တိုဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၉ မေ ၂၈၊ ၂၀၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ – ၁၄
ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ် General Koji YAMASAKI ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီးရောက်ရှိနေသော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင် လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ Tokyo မြို့ရှိ၊ Narita လေဆိပ်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်သူ၊ ဂျပန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Colonel ISHIWATA၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးကြီး တင်စိုးနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင်ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ညနေပိုင်းတွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိကြရာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနောင်နှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်ပုံ ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E.Mr.Ichiro MARUYAMA ၊စစ်သံမှူး Col. TAKASHI KOMATSU တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ် တွင် ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညိုစော၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိများ ပြန်လည်လိုက်ပါလာခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်အတွင်း ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် H.E. Mr. Shinzo ABE အပါအဝင် ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများ နှင့် ဂျပန်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များ၏ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်တို့အား တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံနှင့်နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်၊ သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် စက်မှု လုပ်ငန်းများအား ကြည့်ရှုလေ့ လာခြင်း၊ တိုကျိုမြို့ရှိ အထင်ကရနေရာများသို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်းနှင့် မြို့ပြလူနေမှုစနစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများနှင့် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးစနစ်များအား လေ့လာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တုိဘာ – ၁၄
ဂ်ပန္ကုိယ္ပုိင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ General Koji YAMASAKI ၏ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႕ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးေရာက္ရွိေနေသာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္ လိႈင္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ယေန႕နံနက္ပုိင္းတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ Tokyo ၿမိဳ႕ရွိ၊ Narita ေလဆိပ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ ျပန္လည္ထြက္ခြာၾကသည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီး ဦးျမင့္သူ၊ ဂ်ပန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ Colonel ISHIWATA၊ ျမန္မာစစ္သံ(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္မွဴးႀကီး တင္စုိးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေလဆိပ္တြင္ပုိ႕ေဆာင္ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။
ထုိ႕ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ညေနပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္သုိ႕ေရာက္ရွိၾကရာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေနာင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သက္ပုံ ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Ichiro MARUYAMA ၊စစ္သံမွဴး Col. TAKASHI KOMATSU တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေလဆိပ္ တြင္ ႀကိဳဆုိ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ညိဳေစာ၊ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးထြဋ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား ျပန္လည္လုိက္ပါလာခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ H.E. Mr. Shinzo ABE အပါအ၀င္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အစုိးရအဖြဲ႕မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ဂ်ပန္ကုိယ္ပုိင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ပူးတြဲစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႕အား ေတြ႔ဆုံ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ႏွစ္ႏုိင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္၊ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေလ့ လာျခင္း၊ တုိက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ အထင္ကရေနရာမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈမ်ားႏွင့္ သယ္ယူ ပုိ႕ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားအား ေလ့လာျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်အဖွဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ(ရုပ်သံသတင်း)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ(ရုပ်သံသတင်း)
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၊ ၂၀၁၈ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် UWSA(ဝ) အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများအားလက်ခံတွေ့ဆုံ၍ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်
စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၂၀ Admin 0
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ထံမှ ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ (World Press Freedom Day) အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ(ရုပ်သံသတင်း)
မေ ၄၊ ၂၀၁၉ Admin 0
မေ ၁၁၊ ၂၀၂၁ Admin 0
နေပြည်တော် မေ ၁၀ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေး (၁၀/၂၀၂၁)ကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။ အစည်းအဝေးသို့ နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့်
မေ 2021 (၄)